လူတိုင်းအတွက် လက်တွေ့အသုံးချ နိဗ္ဗာန်လမ်းပြ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း (ပထမပိုင်း) <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဒီဇင်ဘာ ရုံးပိတ်ရက်များ အတွက်
လူတိုင်းအတွက် လက်တွေ့အသုံးချ နိဗ္ဗာန်လမ်းပြ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း (ပထမပိုင်း)
ဗုဒ္ဓသားတော်၊ သမီးတော်မှန်ရင် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းကို သင်ယူသင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
ပိဋက(၃)ပုံကို တစ်ကျမ်းထဲဖြင့် ခြုံငုံရေးသားထားသော ကျမ်းကို ပြပါဆိုလျှင် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းဟုသာ ပြဆိုရပါမည်။
ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသော ပိဋက (၃)ပုံကို အကျဉ်းချုပ်လျင် ဗောဓိပက္ခိယ (၃၇) ပါး ရပါသည်။
ဗောဓိပက္ခိယ (၃၇) ပါးကို အကျဉ်းချုပ်လျင် မဂ္ဂင် (၈)ပါး ရပါသည်။
မဂ္ဂင် (၈)ပါးကို အနှစ်ချုပ်လျှင် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဟူသော ကျင့်ဖွယ်ရာသိက္ခာ (၃)ပါး ရပါသည်။
ထို ကျင့်ဖွယ်ရာသိက္ခာ (၃)ပါး ကို ပိဋက (၃) ပုံမှ အနှစ်ချုပ်၍ ထုတ်ပြသော တစ်ခုတည်းသော ကျမ်းသည် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားအနှစ်ချုပ် အစစ်အမှန်ကို အလွယ်တကူ သိရှိလိုကြသော ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ မှန်သမျှ ပိဋက(၃)ပုံ၏ အနှစ်ချုပ်ဖြစ်သော ဤဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်း သင်တန်းကို မဖြစ်မနေ လေ့လာသင်ယူသင့် လှပါသည်။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်း၌ သီလနိဒ္ဒေသ၊ ဓူတင်္ဂနိဒ္ဒေသ၊ စသည်ဖြင့် အခန်းပေါင်းများစွာ ပြဆိုထားပါသည်။
(၁) သီလဟူသည် အဘယ်နည်း
(၂) သီလ၏ အနက်သဘောသဘာဝကား အဘယ်နည်း
(၃) သီလ၏ လက္ခဏာ၊ ရသ၊ ပစ္စုပဋ္ဌာန်, ပဒဋ္ဌာန်တို့ကား အဘယ်နည်း
(၄) သီလအကျိုးတရားက အဘယ်နည်း
(၅) သီလသည် အဘယ်မျှ အပြားရှိသနည်း၊
(၆) သီလ၏ ညစ်ညူးကြောင်းကား အဘယ်နည်း၊
(၇) သီလ၏ ဖြူစင်ကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
ထို့အတူ သမာဓိကို ပြဆိုရာမှာ
(၁) သမာဓိဟူသည် အဘယ်နည်း (ပ)
(၇) သမာဓိ၏ ဖြူစင်ကြောင်းကား အဘယ်နည်း
စသည်ဖြင့် သူ့အခန်းနှင့်သူ အသေးစိပ် အနှစ်ထုတ်၍ ပြဆိုထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဒတရားတော်များကို ဂဃနဏ သိလိုသူ လုပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှ ဤ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်း သင်တန်းကို မဖြစ်မနေ လေ့လာသင်ယူသင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းနှိုဆော်အပ်ပါသည်။
သင်တန်း နေ့ရက်၊ (စုစုပေါင်း ၅ရက်)
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် (စနေနေ့) နေ့လည် (၁) နာရီမှ ညနေ (၈) နာရီ ထိ
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် (၁) နာရီမှ ညနေ (၈) နာရီ ထိ
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် (တနင်္လာနေ့ Christmas Holiday) နေ့လည် (၁) နာရီမှ ညနေ (၈) နာရီ ထိ
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် (စနေနေ့) နေ့လည် (၁) နာရီမှ ညနေ (၈) နာရီ ထိ
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် (၁) နာရီမှ ညနေ (၈) နာရီ ထိ
ဤသင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် Chan Myay Yeiktha Meditation Centre (Singapore) မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။
မှတ်ချက်။ ဤ (၅) ရက် သင်တန်းကို တက်ရောက်ဖို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့ စနေနေ့ ရုံးတက်ရသဖြင့် ၅ ရက်စလုံး မတက်ရောက်နိုင်သူများသည် မိမိတို့ တက်ရောက်နိုင်မည့် နေ့ရက်များကို ဖေါ်ပြ၍ စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ နေရာထိုင်ခင်းသည် ကျယ်ဝန်းသဖြင့် အဆင်ပြေသော်လည်း အစားအသောက် စီစဉ်သူများ၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ စာရင်းပေးသွင်းမှုကို လက်ခံ သွားပါမည်..
သင်တန်း တက်ရန် စာရင်းပေးထားသူများ
လေယဉ်လက်မှတ်ခ - စင်္ကာပူဒေါ်လာ၃၀၀
အားလပ်ချိန် အဟာရဒါန - တစ်ရက်စာ - စင်္ကာပူဒေါ်လာ၅၀၀
ရေသန့် - တစ်ရက်စာ - စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀
ကော်ဖီ - တစ်ရက်စာ - စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
သင်တန်းသားများအတွက် ခုံငှားခ - စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀
(၂) လှုဒါန်းသည့် အကြောင်းအရာ - ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း (ပထမပိုင်း)
Route 1 (blue color)
From Toa Payoh Bus Interchange,
Take Bus No 235 or 238,
Alight at 3rd bus stop near blk 264, 263
Please look out for blk 252
Route2(red color)
Take Bus No 8 or 26 or 31 or 90 or 142
Alight at 3rd bus stop, after BLK 195.
When you see bus trun to the high-way, please alight at immediate bus stop.
Please look out for blk 195
Route3(red color)
Same with route2except taking bus no 985
ကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင် တရားဟောခန်းမကို အောက်ပါ မြေပုံအတိုင်း ရှာဖွေပါရန်
၂၃-၁၂-၂၀၁၇ရက်နေ့ ညနေအဟာရ အလှူရှင်များ
၂၄-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေအဟာရ အလှူရှင်များ
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော မိဘ နှစ်ပါး နှင့် ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟ အပေါင်းတို့အား ရည်စူး၍
၂၅-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေအဟာရ အလှူရှင်များ
မကဉ္စနီနွယ်၊ မသက်သက်မွန် မခင်ဖြူဖြူဝင်း တို့မှလှူဒါန်းပါသည်။
၃၀-၁၂-၂၀၁၇ရက်နေ့ ညနေအဟာရ အလှူရှင်များ
၁) ဦးမျိုးမြင့် +ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း မိသားစု
၂) ဦးပန်းအောင်+ဒေါ်လှလှဝင်း မိသားစု
၄) ဦးသန်းနိုင်+ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် (သမီး)ခိုင်ရည်လင်းမိသားစု
၅) ဦးမောင်မောင်လေး+ဒေါ်နုနုခင် မိသားစု
၃၁-၁၂-၂၀၁၇ရက်နေ့ ညနေအဟာရ ကြာဇံကျော် အလှူရှင်များ
၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ အလှူရှင်များ
၁) မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းအေးအားရည်စူး၍ သမီး မအေးသန္တာလှိုင် (ကော်ဖီ S$၁၀၀)
၂) Mr Tye Lee Sun + Daw Nu Nu Khine (drinking water S$200)
၂၄-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ အလှူရှင်များ
၁) မယဉ်သူသူနွယ်။ (ရေသန့် S$၁၀၀)
၂) မျိုးသက်လင်း။ (ရေသန့် S$၁၀၀)
၃) မနီနီမြင့် (ကော်ဖီ S$၁၀၀)
၂၅-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ အလှူရှင်များ
၁) မစောယုကြည် မအေးစုကြည် ညီအမ ၂ယောက်။ (ရေသန့် s$၂၀၀)
၂) ဦးသိန်းဇော်+ဒေါ်မြမြဌေး (သမီး) မမေဖြူသော်။ (ကော်ဖီ s$၁၀၀)
၃၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ အလှူရှင်များ
၁) ဦးမျိုးမြင့် +ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း မိသားစု (ကော်ဖီ)
၂) ဦးပန်းအောင်+ဒေါ်လှလှဝင်း မိသားစု (ကော်ဖီ)
၃) ဦးနေဝင်း+ဒေါ်တင်မေဝင်း (ကော်ဖီ)
၄) ဦးသန်းနိုင်+ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် (သမီး)ခိုင်ရည်လင်းမိသားစု (ကော်ဖီ)
၅) ဦးမောင်မောင်လေး+ဒေါ်နုနုခင် မိသားစု (ကော်ဖီ)
၆) မစုဝါထွန်း (ရေသန့် S$၁၀၀)
၇) မတင်ချိုဦး (ရေသန့် S$၁၀၀)
၁) မနွယ်နီအောင်။ (ရေသန့်S$၁၀၀)
၂) ဦးကြည်ထွန်း ဒေါ်လဲ့လဲ့မိုး။ (ရေသန့် S$၅၀)
၃) ဦးမြင့်ဆွေ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်သိန်း မိသားစု (ရေသန့် S$၅၀)
၄) ဒေါ်အေးအေးမြင့် (အောင်စပ္ပါယ် လက်ဖက် ခြောက်လုပ်ငန်း) ဒေါ်နီနီဝင်း ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဆွေ။ (ကော်ဖီ S$၁၀၀)
၅ ရက်တာ ပန်းအလှူရှင်
ဖခင် ဦးအောင်ကျော်+မိခင်ဒေါ်စိန်စု အားအမှုးထား၍ သမီး မမြသန္တာကျော် မှလှူဒါန်းပါသည်။
ဆရာတော်အတွက် လေယဉ်လက်မှတ် အလှူရှင်
၁) မစိုးစိုးဆင့် S$၂၀၀
၂) မဇင်မာရွှေ S$၁၀၀
၃) ဦးကျော်ကျော်မိုး ဒေါ်သင်းသင်းနိုင် မိသားစု S$၇၀
၄) ဦးမြင့်ဆွေ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်သိန်း မိသားစု S$၅၀
၅) ဖခင် ဦးတင်ညွှန့်အား ရည်စူး၍ သမီး ဒေါက်တာ ခင်မြတ်နွယ် S$၂၀၀
၆) ကိုဇင်ကို+မသန္တာ S$၅၀
၇) မမေဇင်အေး S$၁၀၀
၈) မသီတာဝင်း S$၅၀
၉) မယုဝါကြည် S$၅၀
၁၀) မရွှေဇင်အိဖြူ S$၇၅
၁၁) မသီရိ ှS$၄၅
၁) ဦးမျိုးဆွေ ဒေါ်မိုးမိုးမြင့် နှင့် သားများ S$၁၅၀။
၂) ကိုအောင်နိုင်စိုး မသန်းသန်းရွှေ မိသားစု S$၂၀၀
မနှင်းနှင်းယု မိသားစု S$၂၀၀
၄) ဇင်ဝေမြင့်မှ S$၁၀၀
၅)ကိုဇော်မင်း မတင်မိုးမိုးနိုင် မှ S$၁၀၈
၆) မသီရိ ှမှ S$၅၅
၇) ကွယ်လွန်သူ ဦးဝင်းကြိုင် အားရည်စူး ၍ ဒေါ်ခင်ထားဆွေ သားသမီးမြေးတစ်စု မှ S$၁၀၀
၈) ဦးစိုးမြင့် ဒေါ်နွယ်နီဝင်း သမီး စိုးစန္ဒာနွယ် မိသားစု မှ S$၁၀၀
၉) ကိုဇော်ဇော်ထွန်း မစမ်းမြင့်နွယ် သမီး ဝတီ သား jasper မိသားစု မှ S$၁၀၀
၁၀) ကွယ်လွန်သူ နှစ်ဖက် ဖခင်များ ဦးစိန်လှိုင်၊ ဦးမြဝင်းတို့အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများအားအမှုထားပြီး ဦးသိန်းမော်၊ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် မိစားစု S$100
ဦးဇော်ဝင်းဆွေ & Dr.အေးအေးမော် သားကြီးမောင်ကျော်ဇော်ဟန်
သားငယ်မောင်ထက်မြတ်ဇော် မိသားစုမှ တစ်နေ့တာ တရားဟောခန်းမ S$၁၀၀၀
သမီးအေးအေးမြင့် S$ ၃၀၀
၂) ကိုဇော်ဇော်ထွန်း မစမ်းမြင့်နွယ် သမီး ဝတီ သား jasper မိသားစု မှ S$၁၀၀
၃) မနန်းတင်တင်ပြုံး S$၁၀၀
၄) ( ဖခင် ဦးထွန်းမြင့် ) အား ရည်စူး၍ မိခင် ဒေါ်ရင်ရင်ရွှေ မိသားစု- $S ၂၀၀
၅) ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြိုင်မှ S$-၁၀၀
၆) ဦးပန်းအောင်+ဒေါ်လှလှဝင်း မိသားစု မှ S$-၂၀၀
၁) ကိုအောင်သူရ+မဖြူဖြူဝင်း၊ သမီး ဝင်းဝင့်အောင် S$၁၀၀၀
၂) ဒေါ်အေးအေးမြင့် (အောင်စပ္ပါယ်လက်ဖက်ခြောက်လုပ်ငန်း)၊ ဒေါ်နီနီဝင်ဝင်း၊ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဆွေ S$၁၀၀၀
သင်တန်းသားများအတွက် ခုံငှားခ အလှူရှင်များ
၁) မမေဇင်အေး S$၁၀၀
၂) ဒေါ်အေးအေးမြင့် (အောင်စပ္ပါယ် လက်ဖက်ခြောက်လုပ်ငန်း) ဒေါ်နီနီဝင်း ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဆွေ S$၂၀၀
ဤသို့ လှူဒါန်းရသော ကုသိုလ်ကြောင့် သူတော်ကောင်းတို့ မိသားစုသည် ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများ ပြည့်ဝလျှက် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် အတွက်
၁။ ရဲကျော်ထွန်း ၉၁၇၅၀၈၇၄
၂။ မခိုင်ခိုင် ၉၇၂၅၃၄၈၂
၃။ ကိုမင်းနိုင် ၉၇၃၅၈၉၃၁
အမှတ်(၁၁) ၂၀၁၃ မေလ ၁၉ ရက်နေ့ - နေ့လည် ၄း၀၀ နာရီမှ ၅း၃၀နာရီ http://dhammadownload.com/MP4Library/Bhaddanta-Thuseiktha-Vivamsa/Abidhamma-2013-May/11-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-19-5-2013-4to530.mp4
အမှတ်(၁၃) ၂၀၁၃ မေလ ၂၄ ရက်နေ့ - နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီမှ ၁၁း၃၀နာရီ http://dhammadownload.com/MP4Library/Bhaddanta-Thuseiktha-Vivamsa/Abidhamma-2013-May/13-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-24-5-2013-1030to1130.mp4
အမှတ်(၁၄) ၂၀၁၃ မေလ ၂၄ ရက်နေ့ - နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီမှ ၂း၀၀နာရီ http://dhammadownload.com/MP4Library/Bhaddanta-Thuseiktha-Vivamsa/Abidhamma-2013-May/14-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-24-5-2013-1to2.mp4
အမှတ်(၂၁) ၂၀၁၃ မေလ ၂၅ ရက်နေ့ - နေ့လည် ၄း၀၀ နာရီမှ ၅း၃၀နာရီ http://dhammadownload.com/MP4Library/Bhaddanta-Thuseiktha-Vivamsa/Abidhamma-2013-May/21-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-25-5-2013-4to530.mp4
၉၅။ ဒုတိယအဆင့်ပို့ချချက် ဝီထိပိုင်း ပို့ချချက် အမှတ်စဉ် (၁၇) ဆိုရိုး ၆-၆-၂၀၁၀
၉၈။ ဒုတိယအဆင့်ပို့ချချက် ဝီထိပိုင်း ပို့ချချက် အမှတ်စဉ် (၂၀) ဆိုရိုး ၁၅-၆-၂၀၁၀
၉၉။ ဒုတိယအဆင့်ပို့ချချက် ဝီထိပိုင်း ပို့ချချက် အမှတ်စဉ် (၂၁) အဓိပ္ပါယ် ၁၆-၆-၂၀၁၀
၁၀၅။ ဒုတိယအဆင့်ပို့ချချက် ဝီထိပိုင်း ပို့ချချက် အမှတ်စဉ် (၂၇) ဆိုရိုး ၇-၇-၂၀၁၀
၁၀၆။ ဒုတိယအဆင့်ပို့ချချက် ဝီထိပိုင်း ပို့ချချက် အမှတ်စဉ် (၂၈) အဓိပ္ပါယ် ၁၃-၇-၂၀၁၀